सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्र भदौ ५ गतेदेखि, ऋणपत्रको अवधि सात वर्ष
साउन २९, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले भदौ ५ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासनमार्फत ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ सालसम्मका लागि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न लागेको छ । बैंकले १५ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १० लाख कित्ता व्यक्तिगत संघ संस्थाका लागि निष्कासन गरेको । विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सात वर्षे अवधिको यो ऋणपत्र निष्कासनमा छिटोमा भदौ ९ र ढिलोमा असोज ५ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । २०८३ मा परिपक्क हुने यो ऋणपत्र खरीदका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतमा १० लाख कित्तासम्म सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्रति ऋणपत्रमूल्य रू. १००० तोकिएको छ ।
बैंकको अधिकृत पूँजी रू. १० अर्ब ५० करोड रहेको छ । जारी पूँजी रू. ८ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढी छ । आवेदकले नेपाल धितोपत्र बार्डबाट स्वीकृति पाएका सि-आस्बा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले गत आव २०७५/०७६ मा रू. २ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा रू. १ अर्ब ६५ करोड छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ५९ रहेको छ ।